DaimlerChrysler Motors Company LLC, achiin diqqo turee immo kan Chrysler Holding LLC jedhamu,kuni konkollatta midhasitotta America yoo ta'u, kan kophatti ofiin konkollatta midhagsu jalqaban immo bara 1925t. Yeroo bayye maqaan ittii wamamu Chrysler Group jedhame wamama.
May 14 2007t DaimlerChrysler AGn akka konkollatta Chrysler isaan midhasan kessa percenti 80.1% akka Cerberus Capital Management, L.P. iif gurguru ifaa godhee ture. Yoo kenaan kuni dhummatu, Chrysleriin maqqa Chrysler Holding LLC jedhamu akka fudhattu himame ture.
Chrysler fi dameen isaa jalatti argaman biyya German jalatti maqaa DaimlerChrysler AG osoo jirru, walii-galtee "Merger of Equals" jedhamuni,Daimler-Benz wajjin bara 1998tii godhame. NYSE irratti, walii-galtee bara 1998 godhame irratti, Chrysler Corporationiin qubee "C" jalatti U.S.f kenname. Maqaan Chrysler Corporation U.S. kessatti "Chrysler Group" jedhama. Maqaan birra konkolatotta Chrysler kenname Mopar jedhama. Gossa konkollata Chrysler durii fi amma gadii ilalli.
Chrysler Durii[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Chrysler Model B-70 Touring 1924
Chrysler Series 60 2-Door Sedan 1926
Chrysler Series E-80 Phaeton 1926
Chrysler Series 66 Phaeton 7-Passenger 1930
Chrysler Series CM 4-Door Sedan 1931
Chrysler Series CA 4-Door Sedan 1934
Chrysler Airflow Series CU 4-Door Sedan 1934
Chrysler Airstream Series C-7 4-Door Touring Sedan 1936
Chrysler Convertible Sedan 1937
Chrysler Royal Series C-18 4-Door Sedan 1938
Chrysler Sebrings 1999 and 2002
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Chrysler&oldid=30100" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 28 Muddee 2017, sa'aa 07:59 irratti.